My World: မြန်နှုန်းမြင့်ကားတွေ မောင်းနှင်ရတာ ကြိုက်သလို ... ဘဝကို ပါးနပ်စွာမောင်းနှင်နေသူ
မြန်နှုန်းမြင့်ကားတွေ မောင်းနှင်ရတာ ကြိုက်သလို ... ဘဝကို ပါးနပ်စွာမောင်းနှင်နေသူ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, July 09, 2013 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်လောကဟာ သပ်ရပ်ကြော့မော့နေတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမှာ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ နာမည်အကြီးဆုံးသရုပ်ဆောင်တွေမှာ အမျိုးမျိုးအထွေထွေကွဲပြားတဲ့ ဇာတ်ကောင်စရိုတ်တွေရှိကြတယ်။ ဇာတ်ကောင်စရိုက်တိုင်းမှာ တသားတည်းကျအောင် ပူးကပ်နှောင်တွယ် သရုပ်ဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ အဲဒီသရုပ်ဆောင်မျိုးတွေဟာ သရုပ်ဆောင်ခြင်းအနုပညာနဲ့ ငွေကြေးသန်းပေါင်းများစွာရှာဖွေနိုင်ကြတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ဂျွန်နီဒက်ပ်ဆိုရင် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ရှာဖွေနိုင်တယ်။ ဒီကာပရီယိုက ဒေါ်လာ ၇၇ သန်းပါ။ ဒက်ပ်ရော ဒီကာပရီယိုပါ ကြွယ်ဝချမ်းသာသလို သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ တစ်မူးထူးခြားကွဲပြားသရုပ်ဆောင်စရိုတ်တွေကြောင့်လည်း ကျော်ကြားခဲ့ကြတယ်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ ၁၉၉၇ က Titanic ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ လီယိုနာဒို ဒီကာပရီယိုဟာ ထူးခြားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ရွေးချယ်လာခဲ့တယ်။ နုနယ်ငယ်ရွယ်တဲ့သရုပ်ဆောင်လေးဟာ အချစ်ဇာတ်မြူးရုပ်ရှင်တွေမှာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်ခဲ့သလို အက်ရှင်လူစွမ်းကောင်းလည်းဖြစ်လာခဲ့တာပါပဲ။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်အလုပ်လုပ်တဲ့ ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ ရိုက်ကုးနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို စောင့်ဆိုင်းခဲ့တယ်။ ၂၀၀၀ မှာ ဒါရိုက်တာ ဒယ်နီဘွိုင်းရဲ့ The Beach မှာ သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ Danny Boyle ရဲ့ The Beach ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ နောက် ၂ နှစ်ကြာတဲ့အခါ Gangs of New York မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ဒါရိုက်တာ Martin Scorsese နဲ့ လက်တွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး The Departed မှာလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းသရုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာပဲ ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg ရဲ့ Catch Me If you Can မှာ ပြင်သစ်မိခင် နဲ့ အမေရိကန်ဖခင်တဲ့ ကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့အချိန် ၁၉ နှစ်အရွယ်လူငယ်လေး၊ သူ့ရဲ့ ပြင်သစ်စာသင်တန်းမှာ အစားထိုးကျောင်းဆရာလေးအဖြစ်၊ မိဘတွေနဲ့ ဝေးရာပြေးထွက်ခဲ့ရာက သုံးစရာပိုက်ဆံမရှိတော့တဲ့အခါ လူတွေကိုအယုံသွင်းပြီးပိုက်ဆံရဖို့ ကြိုးစားလာခဲ့သူ လူငယ်လေးအဖြစ်လည်း သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ နောက်ဆုံး လေယာဉ်မှူးတစ်ဦးအဖြစ်ပိပိရိရိဟန်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်လာ ၂.၈ သန်းရရှိသွားခဲ့ပြီး တွမ်ဟန့်ခ် လို FBI အေးဂျင့်နဲ့ ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကောင်မျိုးမှာ ထူးထူးခြားခြားသရုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။
၂၀၁၀ မှာ ဒီကာပရီယိုရဲ့ ကျော်ကြားမှုဟာ ဟောလိဝုဒ်မှာ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ဒီကာပရီယိုရဲ့ နောက်ထပ်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ Shutter Island နဲ့ Inception မှာ ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံအထိ ဝင်ငွေရရှိခဲ့တာပါ။ Shutter Island ကတော့ ဒါရိုက်တာ စကော့စီး နဲ့ လက်တွဲဖြစ်တဲ့ ၄ ကားမြောက်ဖြစ်ပြီး Inception က တော့ ခရစ်စတိုဖာနိုလန် ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ မေ ၂၀၁၀ ကနေ မေ ၂၀၁၁ အတွင်းမှာတောင်း ဒေါ်လာ ၇၇ သန်း ရှာဖွေနိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ဒီကာပရီယိုရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ များပြားသလို စိတ်ဝင်စားရာဝါသနာတွေကိုလည်း ပုံဖော်နိုင်ခဲ့တာပဲပေါ့။
၁. မာလီဘူး၊ ကာဘွန်ကမ်းခြေက အိမ်ပါ။ တန်ကြေး ၂၃ သန်းရှိပါတယ်။ အဆင့်မြင်ပြင်ဆင်ထားပြီး ကမ်းခြေဘက်မျက်နှာမူထားတာကြော်င့ အိမ်ငှားခအတွက် တစ်လကို ဒေါ်လာ ၁၅၀ ၀၀၀ ပေးရတဲ့ အိမ်လေးပါပဲ။ ၆ လစာပိုပြီး ဌားရမ်းနေထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ဝက်တိတိလျှော့ချယူပါတယ်တဲ့။ တိုက်တန်းနစ်စတားဟာ ၂၀၀၂ က ဒေါ်လာ ၆ သန်းနဲ့ အဲဒီကမ်းခြေအိမ်လေးဝယ်ယူခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ကမ်းခြေအိမ် သုံးလုံး ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အနီးအနားမှာ ဘရက်ပစ်၊ တိုနီဒန်ဇာ နဲ့ ချားလိဇ်သီရွန် တို့လို ထင်ရှားတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။
ဟောလိဝုဒ်ဟေးလ်စ်ရဲ့ Bird Street အပိုင်းက အော်ရီယိုးဝေးမှာ သိပ်မဝေးလှတဲ့ အိမ်နှစ်လုံးလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒီအိမ်ကို ၁၉၉၉ မှာ ဒေါ်လာ ၄ သန်းနဲ့ ဝယ်ယူခဲ့တယ်။ ဒီကာပရီယိုဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် စွမ်းအင်ချွေတာ နေအလင်းအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ဆိုလာပြားတွေတပ်ဆင်ထားတယ်။ အိပ်ရာအတွက် အော်ဂဲနစ်ပြားတွေသုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်ကတည်းက ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်မွမ်းမံထားတဲ့အိမ်ပါ။ ဒီအိမ်ရဲ့ အနီးက ကျော်ကြားသူတွေထဲမှာ ဂျပ်စတင်တင်းဘားလိတ်ခ်လည်း ရှိနေတယ်။
၃. မာလီဘူး စံအိမ်
ဟောလိဝုဒ်ဟေးလ်စ်အိမ်ရဲ့ နောက်တစ်လမ်းမှာရှိတယ်။ ဧရိယာ အကျယ်အဝန်း ၃၉၈၀ စတုရန်းပေးရှိကာ ဒေါ်လာ ၃၇၈၀ ၀၀၀ နဲ့ ၂၀၀၃ ခုနှစ်က ဝယ်ယူခဲ့တယ်။
၄. Riverhouse တိုက်ခန်း
ဒီအိမ်ခန်းဟာ eco-friendly အပြင်အဆင်မျိုးနဲ့ပါပဲ။ နယူးယောက် Rockefeller ပန်းခြံအနီးမှာရှိပါတယ်။ ဟာဒ့်ဆန်မြစ်တစ်လျှောက်က အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ အခန်းပေါင်း ၂၆၄ ခန်းရှိပြီး ၃၂ ထပ်ရှိတယ်။ Green Building မျိုး အလေးထားတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
၅. Blackadore Cay ကျွန်း
ဟောလိဝုဒ်စတား ကိုယ်ပိုင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပါပဲ။ ၂.၂ မိုင် ရှည်လျားပြီး ပေ ၂၁၀ ကနေ ၆၃၀ အထိ ကျယ်ဝန်းပါတယ်။ အဲဒီကျွန်းကို ၂၀၀၄ အားလပ်ရက်အပမ်းဖြေခရီးထွက်ရင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ကရစ်ဘီယံပင်လယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း Belize ကမ်းခြေ၊ အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်တဲ့ Ambergris Caye ရဲ့ အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဒီကာပရီယို အဲဒီ ၁၀၄ ဧကကျယ်ဝန်းတဲ့ကျွန်းကို ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့် ဝေဟစနစ်ထိန်းအဆင့်မြင့်အပမ်းဖြေနေရာအဖြစ် ပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ပါတယ်။ eco-friendly အလေးထားဆောက်လုပ်ထားပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မပျက်စီးစေဖို့ အထူးရည်ရွယ်ထားတယ်။ ပြောင်းလဲဆန်းသစ်လာတဲ့ Green နည်းပညာကို စမ်းသပ်ဖန်တီးချင်တဲ့ ဒီကာပရီယိုရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေစိတ်ကူးပါပဲ။ ရေ၊ လေ နဲ့ နေရောင် သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေကိုအသုံးပြု ထိန်းသိမ်းမယ့် စံအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ရေပေါ်ဘန်ဂလို၊ ကမ်းခြေဘန်ဂလို ၊ ဟိုတယ်ရွာ ရေပူစမ်းspa တစ်ခုလည်းပါဝင်တည်ဆောက်ထားတယ်။
လီယိုနာဒိုဒီကာပရီယိုရဲ့ ဝါသနာတွေမှာ အမွေးအတောင်ထူထူသိပ်သိပ်ငှက်တွေကို စောင့်ကြည့်ရတာ ဝါသနာပါတတ်သူပါ။ အားလပ်ချိန်တွေမှာ လန်ဒန် Tate Modern ပြတိုက်မှာ အမဲလိုက်သိမ်းငှက်မျိုးတွေ မကြာခဏသွားရောက်ကြည့်ရှုတတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ Playsation ဂိမ်းတွေကစားရတာ ကိုလည်း အင်မတန်နှစ်သက်သေးတယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်း ချစ်မြတ်နိုးသူပါပဲ။ ကျော်ကြားသူအများစုပိုင်ဆိုင်လိုကြတဲ့ ပြင်သစ် bull dog လေးတွေ ချစ်ခင်တယ်။ ဒီကာပရီယိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ bull dog လေးကို ဂျန်ဂို လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။ နောက်ထပ်ဒီကာပရီယိုမှာ အာဖရိကန်လိပ်လေးတစ်ကောင်မွေးထားပါသေးတယ်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်က မြောက်အမေရိကန်တွားသွားသတ္တဝါပြပွဲတစ်ခုကို သွားခဲ့ရင်းနဲ့ ဒေါ်လာ ၄၀၀ ပေးဝယ်ယူခဲ့တာပါ။ ၁၀နှစ်သား လိပ်လေးဟာ ပေါင် ၂၀၀ လေးတယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလိပ်လေးက ကလေးငယ်အရွယ်ပါတဲ့။ အဲဒီ အာဖရိကန် Sulcata လိပ်အမျိုးအစားဟာ သက်တမ်း ၈၀ ခန့်အထိ အသက်ရှည်ကြတယ်။
ဒီကာပရီယိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေမှာ ဆွစ်ဇ် Tag Heuer နာရီ၊ Marc by Marc Jacobs နေကာမျက်မှန်၊ Armani ဝတ်စုံ နဲ့ Polo Ralph Lauren အဝတ်အစားနဲ့ ဒီကာပရီယိုကို Martin Scorsese ရိုက်ကူးတဲ့ The Wolf of Wall Street ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းမှာ တွေ့ကြရမှာပါ။
လီယိုနာဒိုဒီကာပရီယို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကား “The 11th Hour” ဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပညာပေးနိုင်မယ့် “အဆင်မပြေတဲ့အမှန်တရား” ကို ရှာဖွေပြသသွားခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အဖြစ် ထူးခြားခဲ့ပါတယ်။
ဒီကာပရီယို စိတ်ကြိုက်ကားတွေကတော့ တိုယိုတာ Prius ကား၊ Fisker Karma hybrid နဲ့ ၅.၇ စက္ကန့်မှာ 0-60 mph (0to 97km/h) အမြန်နှုန်းမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ တံခါးနှစ်ခုပါ Tesla Roadster ကားတွေပါ။
အမြန်နှုန်းများများ မြှင့်တင်မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ကားတွေကိုနှစ်သက်သလို ဘဝကိုလည်း ပါးနပ်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ဒီကာပရီယိုမောင်းနှင်နေပါတယ်။ ။
Source : http://www.bornrich.com